Home Wararka Dibada Sameer Wankhede: Askarigii xiray wiilka Shah Rukh Khan oo ‘godkiisa ay biyo...
Sameer Wankhede: Askarigii xiray wiilka Shah Rukh Khan oo ‘godkiisa ay biyo ugu galeen’
Aryan Khan oo ah wiilka uu dhalay xiddigga caanka ah ee Bollywood-ka, Shah Rukh Khan, ayaa wax dambi ah lagu waayay kaddib markii lagu soo oogay dacwad ku saabsan in uu isticmaalay daroogo. Haddse waxay fartu ku fiiqan tahay sarkaalkii xabsiga dhigay.
Shan ruux oo uu ku jiro Aryan ayaa Jimcadii laga bari yeelay eedeymaha lagu haystay oo daba socday dacwad ay ka diyaarisay Laanta Xakamaynta Darooga ee magaceeda loo soo gaabiyo NCB.
Hase yeeshee, Guddiga Khaaska ah ee Baaritaanka ee hoos taga NCB ayaa warbixin ay soo saareen farta ugu fiiqay doorka ay kiiskan ku lahaayeen kooxda dacwadda soo diyaarisay ee uu hoggaaminayay Sameer Wankhede.
Sida uu qoray Wargayska caanka ah ee Indian Express, guddiga khaaska ah ee baaritaanka ayaa warbixintooda ku qeexay in kooxda uu horkacayay Sarkaalka ka socday hay’adda Canshuuraha ee Hindiya, Mr Wankhede, ay isku dayeen inay ‘raadiyaan qaab ay dambi been abuur ah ugu yeelaan Aryan Khan’.
Guddiga ayaa xusay in “ay la yaabeen markii ay ogaadeen in Arbaaz Merchant, oo saaxiib la ah Aryan Khan, oo laga helay caddeymaha daroogada qaar, uu si toos ah u beeniyay inuu kiiskan wax lug ah ku leeyahay Aryan, iyadoo ay xitaa sidaas jirtana ay wali askarta baaritaanka wadday daawadeen xogta WhatsApp-ka ee telefoonka Aryan, iyagoo aan si sharci ah ula wareegin moobilkiisa.”
Waxay intaas ku dareen in tallaabada noocaas ah ay muujinayso in Sameer Wankhede uu damacsanaa inuu helo waddo uu si uun dambi ugu helo Aryan Khan.
Wargayska oo soo xiganayay ilo wareedyo ayaa qoray in uu jiray qorshe loo sameeyay Sameer Wankhende si uu xor ugu noqdo baaritaannada kiiskan, taas awgeedna taliyaha isaga ka sarreeyay, Mutha Ashok Jain, uu fasax aaday maalintii la fulinayay howlgalka lagu weeraray guriga Aryan Khan ee magaalada Mumbai, oo ku beegnayd 2-dii bishii October ee sanadkii lasoo dhaafay.
Aryan Khan ayaa in muddo ah loo haystay dacwad ku saabsan eedeymo la xiriira daroogo
Xogta wargayska ayaa intaas raacisay in Mas’uuliyiinta Xarunta Dhexe ee NCB ee magaalada Delhi ay kiiskan ka war heshay maalintii xigtay, oo markaas kaddib uun ay ogaadeen nooca caddeymaha loo diyaariyay kiiska.
Balse Aryan Khan ayaa xilligaas Warbaahinta ka sheegayay in kiiska loo haysto uu yahay fadeexad been abuur ah oo sumcaddiisa lagu waxyeelleynayo.
Tan iyo markii kiiska la laalay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta Hindiya qabsaday hadalhaynta ku saabsan arrintan iyo eedeymaha loo jeedinayo Sameer Wankhede.
Taageerayaasha Aryan, oo jilaa ah sida aabihiis, ayaa hadda ka war sugaya tallaabada xigta ee la qaadi doono.
Waa kuma Sameer Wankhede, oo lagu eedeeyo inuu bartilmaameedsado jilayaasha?
Sameer Wankhede waxa uu kasoo jeedaa gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya. Magaciisa waxa uu soo shaac baxay sanadkii 2008-dii waxa uu ka howl galayay qaybta canshuuraha ee garoomada diyaaradaha.
Markii ugu horreysay waxa uu booliska Hindiya ku biiray sanadkii 2006-dii.
Sameer aabihiis xitaa waxa uu ahaan jiray askari ka tirsanaa booliska Hindiya.
Xilligii uu ka shaqeynayay qaybta canshuuraha ee garoonka diyaaradaha Mumbai, Sameer wuxuu tallaabooyin ka qaaday qaar ka mid ah xiddigaha Bollywood-ka
Markii uu ku biiray waaxda canshuuraha, Wankhede waxaa durbadiiba la geeyay qaybta kastamka. Waxa uu muddo dhowr sano ah taliye ku xigeen ka ahaa waaxda canshuur eegista ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Mumbai.
Waxa uu sidoo kale kasoo shaqeeyay taliska sirdoonka canshuuraha (DRI) iyo iyo Laanta Qaran ee baaritaannada (NIA). Laanta NIA waa hay’ad ka tirsan dowladda oo baaritaanno ku sameysa falalka la xiriira argagixsada.
Sanadkii 2020-kii, Sameer Wankhede waxaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha laanta la dagaallanka iyo xakameynta maandooriyaha ee magaalada Mumbai.
Waxaa sidoo kale la guddoonsiiyay abaalmarinta ugu wanaagsan ee dhinaca baaritaanka, taasoo ay siisay wasaarad ka tirsan xukuumadda.
Wiil uu dhalay Shah Rukh Khan ee indhaha saxaafadda ku wada jeedaan
Nin Muslim ah oo is qarinayay miyaa xiray wiilka Shah Rukh Khan?
Qoyska jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan oo la shaaciyay arrin ay ku farxeen
Sameer Wankhede waxa uu markii ugu horreysay wararka warbaahinta qabsaday 2020-kii kaddib markii uu la wareegay baaritaannada la xiriira eedeymaha ganacsiga daroogada ee ka jiray gudaha Bollywood-ka.
Eedeymaha la xiriira in xiddigaha Bollywood-ka ay ku lug leeyihiin ganacsiga maandooriyaha waxa ay indhaha NCB kusoo jeesteen kaddib geeridii atoorihii lagu magacaabi jiray Sushant Singh Rajput.
Bannaanka ayay iska taallay hadal heynta ku saabsan in jilayaasha Bollywood-ka ay isticmaalaan daroogada, waxaana taas sii dheereyd in Sushant Singh Rajput saaxiibtiis Rhea Chakraborty lagu eedeeyay inay isticmaasho daroogada.
Ciidanka ka howlgala NCB ayaa xabsiga u taxaabay Rhea Chakraborty, kaddibna Sameer Wankhede waxa uu u soo jeestay inuu dabagal ku sameeyo Bollywood-ka.
Xarunta NCB waxaa sidoo kale looga yeeray xiddigaha kala ah Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Rakul Preet Singh iyo Sharaddha Kapoor, kuwaasoo dhammaantood su’aalo laga weydiiyay arrintan, halka majaajiliistaha caanka ah ee lagu magacaabo Bharti Singh isagana loo xiray eedeymo ku saabsan maandooriyaha.
Jilayaasha kale ee su’aalaha la weydiiyay waxaa ka mid ah Arjun Rampal oo ka mid ah atooreyaasha ugu magaca weyn Bollywood-ka iyo atariisada musalsalka telefishinnada ee lagau magacaabo Pratika Chauhan.
“Sanadkan gudihiisa oo kaliya waxaa, NCB waxay fulisay 94 howlgal oo laga sameeyay Mumbai iyo 12 laga sameeyay Goa,” ayuu yiri Wankhede oo la hadlayay Wakaaladda Wararka ee ANI.
Waxa uu intaas ku daray “in 12 qof loo xiray dacwado la xiriira daroogada”.
Laakiin Sameer Wankhede waxaa lagu eedeeyay inuu si sharciga ka baxsan u bartilmaameedsado xiddigaha Bollywood-ka si uu ugu soo caan baxo.
Xitaa markii uu Sameer Wankhede ka howlgalayay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Mumbai, waxaa lagu dhaliilayay inuu si gaar ah u daba dhigan jiray xiddigaha Bollywood-ka.
Intii uu taliye ku xigeenka ka ahaa qaybta canshuur eegista waxa uu ganaax dul dhigay atariishada Bollywood-ka ee lagu magacaabo Manissha Lamba iyo fannaanka la yiraahdo Mika Singh.
Waxaa la sheegay in sanadkii 2011-kii markii koobka ciyaaraha Cricket-ka ee Hindiya ay kusoo guuleysatay la keenay garoonka diyaaradaha Mumbai la diiday in lala soo galo ilaa laga bixiyo canshuur. Xilligaas Sameer ayaa joogay qaybta canshuur eegista.
Previous articleGuddoomiye Aadan Madoobe oo La Kulmay Safiirka Dowladda Turkiga
Next articleCuntada saboolku ay soo saaraan ee madaxweynuhu uu cuno
Hakim Ziyech oo markale lala xiririnayo ku biirista kooxda AC Milan
Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka oo ka horyimid xeer ay ansixiyeen Golaha...
Qaar Kamid Ah Wafdigii La Socday Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Lagu...